တို့ဗမာ အစည်းအရုံး: ကုလား ဟူသည် ဤသို့တည်း - အပိုင်း( ၁ )
မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း လေ့လာခြင်းသည် အရှေ့တောင်အာရှဒေသနိုင်ငံများအကြောင်းကျယ် ကျယ်ပြန့် ပြန့် လေ့လာခြင်းအတွင်းမှ ဆက်စပ်မှုရှိသော အစိတ်အပိုင်းငယ် တစ်ခုဖြစ် သည်။ မြန်မာပညာရှင် တစ် ဦး အနေဖြင့် မိမိ၏အတွေ့အကြုံအရ နိုင်ငံတကာ သုတေသနစာပေများတွင် အဆိုပါအရှေ့တောင် အာ ရှနိုင် ငံများအကြောင်း ရေးသားတင်ပြမှုများ၌ အင်ဒိုနီးရှားနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတို့အကြောင်းကိုသာ အများ အပြားတွေ့ရပြီး အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့၏ စာပေယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဘာသာစကားများကို အလေးပေးရေး သား ကြသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စာပေ၊ဘာသာစကားတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော စာအုပ်စာတမ်းများကို များများစားစား မတွေ့ရချေ။ ထို့အပြင် နိုင်ငံတကာ ပညာရပ်စာပေနယ်ပယ်၌ မြန်မာနိုင် ငံ အကြောင်း ရေးသားထားသည့် အနည်းငယ်မျှသော စာအုပ်စာတမ်းများတွင် အချို့သော အချက်အလက်များသည် မှားယွင်းနေသည့်အပြင် တိကျမှုမရှိပဲ အဓိပ္ပါယ်လွဲမှားစွာ ရေးသားတင်ပြထားသည် ကို လည်း တွေ့ ရှိခဲ့ရသည်။ အဆိုပါစာအုပ်စာတမ်းများထဲမှ မှားယွင်းသော(သို့) လိုရာဆွဲတင်ပြထားသော အ ချက်အလက်များကို ထပ်ဆင့်လေ့လာရေးသားသူများမှ မှီငြမ်းကိုးကား ရေးသားတင်ပြမှုများ ရှိလာသည့် အခါ မှန်ကန်တိကျသော အချက်အလက်များဖြင့် ချေပရေးသားရမည့် အခြေအနေသို့ ဆိုက်ရောက် လာခဲ့သည်။
မြန်မာစာပေ၊ဘာသာစကားနှင့်ပတ်သက်၍ တိကျသော စာအုပ်စာတမ်းများစွာရှိသော်လည်း ၎င်းတို့ မှာ မြန်မာဘာသာဖြင့်သာ ရေးသားထားသော စာအုပ်စာတမ်းများ ဖြစ်သဖြင့် မြန်မာလူမျိုး မဟုတ်သော မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း လေ့လာနေကြသည့် နိုင်ငံခြားပညာရှင်များအတွက် အခက်အခဲများစွာ ရှိနေသည်။ မြန်မာဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပြောဆို၊ရေးသား၊ဖတ်ရှုနိုင်ခြင်း မရှိ သည့် အ တွက် ၎င်းတို့မှာ ဥရောပစာပေဖြင့် ရေးသားထားသည့် စာအုပ်စာတမ်းများကိုသာ အားကိုးလေ့လာနေ ရ သည့် အနေအထားတွင် ရှိနေသည်။
အထက်ပါအချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိမိအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာစာပေသင်ကြားရေးတွင် အတွေ့အကြုံအရှိ ဆုံး မြန်မာပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဆရာဦးတင်ထွေး၏ မှတ်ချက်အား ထုတ်နုတ်တင်ပြလိုပါသည်။ မြန် မာ စာပေနှင့် ဘာသာစကားအား လေ့လာဆည်းပူးနေကြသည့် နိုင်ငံခြားသား ပညာရှင်များ ၊ကျောင်း သူကျောင်း သားများအတွက် အဆိုပါပညာရပ်နယ်ပယ်သည် သာမန်ထက် ကျယ်ပြန့်ပြီး လေ့ လာရန် အ ချက် အလက် အရင်းအမြစ်မြောက်မြားစွာ ရှိနေသည်။ သို့သော် ယနေ့အချိန် အထိ နိုင်ငံခြား သား ပညာ ရှင်များအတွက် မြန်မာစာအုပ်စာတမ်းများ၊ ဂန္တ၀င်စာပေလက်ရာများမှာ ၎င်းတို့လေ့လာနိုင်စွမ်းထက် ပိုမို ကျယ်ပြန့်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အများစုမှာ ဒေသခံများထံမှ အရပ်စကားများ၊ ပါးစပ် ရာဇ၀င်များကိုသာ ကိုးကား၍ စာတမ်းများပြုစုခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့၏ စာတမ်းများကို ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ တည် ရှိနေခဲ့သော ခိုင်မာသည့် မြန်မာစာပေရင်းမြစ်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ သေချာ စစ်ဆေးနိုင်စွမ်း မရှိသည် ကို တွေ့ရှိရသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အဆိုပါနိုင်ငံခြားပညာရှင်များ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများသည် အငြင်းပွားဖွယ်ရှိနေစေကာမူ မိမိတို့အနေဖြင့် လျှစ်လျှူမရှုသင့်ပဲ အသိအမှတ်ပြုသင့်ပါသည်။(1)
မြန်မာဘာသာစကားနှင့် စာပေကိုလေ့လာဆည်းပူးသည့်နေရာတွင် အချို့သောအထောက်အကူပြု စာအုပ်စာတမ်းများကို မြန်မာလူမျိုးပညာတတ်အချို့မှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေး သားပြုစု ထားသည် မှန်သော် လည်း တခြားတစ်ဖက်တွင် အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များသည် အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာပေနှင့်ဘာသာ စ ကား ဆိုင်ရာ ပညာရပ်နယ်ပယ်မှ ပညာရှင်များဖြစ်သော်လည်း မြန်မာစာပေနှင့်ဘာသာစကားဆိုင်ရာ ပ ညာ ရပ်နယ်ပယ်မှ ပညာရှင်များမဟုတ်ချေ။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များသည် စာတမ်းရေးသားပြုစု သည့်နေ ရာတွင် မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်စာပေထက် အင်္ဂလိပ်စာပေအား ပိုမိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြသည်။ ၎င်းတို့ ရေး သားပြုစုသော စာတမ်းများတွင် နိုင်ငံခြားသားပညာရှင်များ၏ အယူအဆများကို ရည်ညွှန်းကိုးကား ထည့် သွင်းရေးသားခြင်းများ မကြာခဏပါရှိတတ်ပြီး ရလာဒ်အနေဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူမှု လွဲမှားခြင်း၊ ခန့်မှန်း မှုအလွဲများ၊ လွဲမှားသည့် ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်များ ဖြစ်ပေါ်လာရပေသည်။
အထက်ပါအချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာစာပေနှင့်ဘာသာစကားထဲတွင် အဓိပ္ပါယ်လွဲမှားစွာ ကောက်ယူ ဘာသာပြန် နားလည်လျှက်ရှိသည့် Kula (ကုလား)ဟူသော စကားလုံးကို ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့် ထုတ်နုတ် တင်ပြလိုပါသည်။ အဆိုပါအခေါ်အဝေါ်တွင် တစ်ဖက်သားအား ထိခိုက်နစ်နာစေသည့် အဓိပ္ပါယ်တစ်စုံ တစ်ရာ မပါဝင်သော်လည်း နိုင်ငံခြားသားပညာရှင်တချို့မှ ထိုစကားလုံးအား အဓိပ္ပါယ်လွဲမှားစွာကောက်ယူ ဘာသာပြန်ဆိုကြပြီး အပျက်သဘောဆန်သော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှုဖြင့် ရေးသားတင်ပြလျှက်ရှိကြသည်။ မိမိအနေဖြင့် ဤစာတမ်းတွင် အဆိုပါစကားလုံးအား အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပုံနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ခိုင်မာသည့် မြန် မာ စာပေအရင်းအမြစ်များ၊ ထင်ရှားသည့် မြန်မာစာပေပညာရှင်များ၏ သုံးစွဲပုံများနှင့် ပညာရှင်မဟုတ်သော သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ ပါးစပ်ရာဇ၀င်များကို အခြေခံကိုးကားခြင်း ရလာဒ်အဖြစ် ပညာရှင်အချို့၏ သတိမမူပဲ လွဲမှားစွာဘာသာပြန်ဆို ရေးသားတင်ပြမှုများကို ထုတ်နုတ်တင်ပြလိုပါသည်။
အခန်း(၂) စာပေအထောက်အထားများအရ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း
ကုလားဟူသည့် အခေါ်အဝေါ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အထောက်အထားမရှိသည့် အယူအဆတစ်ရပ်အနေဖြင့် ကုလားဟူသောစကားသည် ကုလဟူသော ပါဠိစကားမှ ဆင်းသက်လာကြောင်း သိရပြီး မြင့်မြတ်သော အမျိုးအနွယ်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ (ကုလပုတ္တ-မြင့်မြတ်သောအမျိုးအနွယ်မှ ဆင်းသက်လာသော သား) အဆိုပါအခေါ်အဝေါ်အား မြန်မာနိုင်ငံမှ ရှေးဦး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မွန်၊ဗမာ၊ရခိုင်၊ရှမ်း၊ကရင် စသည့် မျိုးနွယ် စုများမှ အိန္ဒိယတိုက်ငယ်မှ မျိုးနွယ်စုများအား ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဗုဒ္ဓကိုယ်တော် တိုင် အိန္ဒိယတိုင်းသားတစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
အဆိုပါယူဆချက်အား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် စာပေများမှ အထောက်အထားများအရ သိရှိရသည်။
ကုလား/ kala/ n 1. native of the Indian subcontinent. 2. court-card; picture card. adj of foreign origin. See also သင်္ဘော [Pali ကုလ]
(2) The Myanmar Language Commission, မြန်မာအဘိဓာန် \_ (Myanmar-Myanmar Dictionary), Yangon, 1991, p. 9
ကုလား /kla;/ n 1’ အိန္ဒိယတိုက်ငယ်ဒေသမှ လာသောသူများ။2သာမန်အားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဖက်ရှိ တိုင်းနိုင်ငံများမှ လာသောသူမျာ3းစက္ကူဖဲတွင် ဂျက်၊ကွင်း၊ကင်း ဖဲချပ်ကိုခေါ်သောစကား န၀ိ- နိုင်ငံခြားမှလာသော။ နိုင်ငံခြားမှဖြစ်သော။ [ပါ၊ကုလ]
(3)ဦးဝန်-တက္ကသိုလ်မြန်မာ အဘိဓာန်၊ အပိုင်း(၁) (The University Burmese-Burmese Dictionary), Rangoon, 1952, vol.1, p. 22.
ကုလား နံ ၁။ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားများ ၂။ သာမန်အားဖြင့်ကား မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဖက်ဒေသများမှ လာသူများ----နံဝိ နိုင်ငံခြားမှဖြစ်သော။ နိုင်ငံခြားမှလာသော။ [မွန်၊ဂလာ။ ပါ၊ကုလ]
(4) U Hoke Sein, ပါဠိမြန်မာအဘိဓာန် ဒုတိယပိုင်း(The Pali-Burmese Dictionary), Rangoon, 1956, vol. 2, p. 329.
ကုလား (Pali) n,arace အမျိုး one whose race is distinctly marked,acaste person;anative of any country west of Burma;aforeigner ...etc.
အချက်အလက် အတိအကျအနေဖြင့် မြန်မာလူမျိုးများသည် ပါဠိစကား ကုလ(မြင့်မြတ်သော- meaning holy, great, noble, distinguished etc.) ပုံစံအမျိုးမျိုး သုံးစွဲကြသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များအား ဥပမာအဖြစ်ထုတ်နုတ်တင်ပြလိုပါသည်။
(b) ကုလားအုတ်(ကုလသြဋ္ဌ)(Kula Oatta)
(c) ကုလကုမ္မာရီ(Kula Kumari)
(d) ကုလပဗ္ဗတ(Kula Pabbata)
ဒုတိယအယူအဆအနေဖြင့်ကုလားဟူသောဝေါဟာရသည်မူလမွန်စကားဂလ(ကောင်းမွန်သော၊မြင့်မြတ်သောလူ များ) မှဆင်းသက်လာကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါအယူအဆအား အထောက်အကူဖြစ်စေ သည့် အထောက်အထားများအား တင်ပြလိုပါသည်။
"The true history of the word has for the first time been traced by Prof. Forchhammer to Gola, the name applied in old Pegu inscriptions to the Indian Buddhist immigrants,aname which he identifies with Sanskrit Gauda, the ancient name of northern Bengal, hence the famous city of Gaur".
(Translation): "The heroes Sona and Uttara were sent to Ramaña, which formsapart of Suvannabhumi, to propagate the holy faith ........ This town is called to this day Gola mattikanagara, because of the many houses it contained made of earth in the fashion of houses of the Gola people."
(4) ခေတ်သစ်မွန်ဘာသာစကားတွင် အိန္ဒိယတိုက်ငယ်မှလူမျိုးများအား ခေါ်ဝေါ်သည့်အမည်မှာ ဂိုလ ဖြစ်သည်။ ပိုးကရင်များက အိန္ဒိယလူမျိုးများအား ကုလ ဟုခေါ်ဆိုပြီး စကောကရင်များက ကိုလ ဟုခေါ်ဆိုကြသည်။ ထိုင်းလူမျိုးများကမူ အိန္ဒိယတိုင်းသားများအား ကားလ် ဟုခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
တတိယအယူအဆအနေဖြင့် ကုလား(ကုလ)ဟူသော ဝေါဟာရသည် Cola/Chola ဟူသော ဝေါ ဟာရများ မှ ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟု သိရှိရသည်။ အဆိုပါအယူအဆအတွက် အရင်းအမြစ်များမှာ အောက် ပါ အတိုင်းဖြစ်သည်။
"Chola, as the name of Tamil(တမီလ်လူမျိုး) people and their royal dynasty appears as Choda in one of Asoka's inscriptions(အာသောကကျောက်စာ), and in the Telugu inscriptions of the Chalukya dynasty."
(2) Myanmar-English Dictionary, Department of the Myanmar Language Commision, Ministry of Education, Union of Myanmar, "A History of the Myanmar Alphabet, p.iv.
“အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် Maurya မင်းဆက်ပျက်သုန်းပြီးနောက် Andhra မင်းဆက်ပေါ် ထွန်းလာ ခဲ့ သည်။ ထို့နောက် Pallava, Kadamba, Calukya, Rashtrakuta နှင့် Cola ကဲ့သို့သော မင်းဆက်များ ဆက် လက်ပေါ်ထွန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါမင်းဆက်များ ထီးနန်းစိုးစံစဉ်ကာလအတွင်း Brahmi (ဗြဟ္မီအက္ခ ရာ စာပေ) တိုးတက်လာခဲ့ပြီး အနောက်ပိုင်းတွင် Pacchimi အရေးအသား၊ အလယ်ပိုင်းတွင် Madhya Pradesh အရေးအသား၊ တောင်ပိုင်းတွင် Telugu, Kanati, academic Grantha နှင့် Kadamba, Calukya , Rashtrakuta တို့ပါဝင်သော Tamil စသည့်စာပေအရေးအသားတို့ ထွန်းကားလာ ခဲ့သည် ။ ဗြဟ္မီ စာပေ မှဆင်းသက်လာသော အဆိုပါစာပေအရေးအသားတို့သည် အိန္ဒိယမှ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုများ ၊ယဉ်ကျေး မှုများနှင့်အတူ အေဒီတစ်ရာစုမှ ရှစ်ရာစုအတွင်း တိဗက်၊သီရိလင်္ကာ၊မြန်မာ၊ထိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် အင်ဒို နီးရှားနိုင်ငံများသို့ ပျံ့နှံ့သွားပြီး အဆိုပါဒေသများမှ တိုင်းရင်းသားဘာသာ စာပေအရေးအသားတို့ကို ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန် ကူညီပေးခဲ့သည်။
အရှေ့တောင်အာရှဒေသသို့ အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းသားများ ရေကြောင်းခရီးဖြင့် အိန္ဒိယစာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု တို့ ကို တပါတည်းယူဆောင်ကာ ရောက်ရှိလာချိန်မှစတင်၍ ဒေသခံများမှ ၎င်းတို့အား Cola (သို့) Chola လူ မျိုး များဟု ခေါ်ဆိုကြမည်မှာ အလွန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါအခေါ်အဝေါ်သည် မွန်တို့ ၏ မူလအသုံးအနှုန်းဖြစ်သော ဂိုလ/ဂလာ၊ ကရင်လူမျိုးတို့၏ ကိုလ/ကုလ နှင့် မြန်မာလူမျိုးတို့ခေါ်ဝေါ်ကြသည့် ကုလား/ကုလ စသည့် အသုံးအနှုန်းများနှင့် လွတ်ကင်းနိုင်ဖွယ်မရှိချေ။
မိမိထုတ်နုတ်တင်ပြခဲ့သည့် စာပေများအရ ကုလားဟူသော ဝေါဟာရသည် ပါဠိစာပေရှိ ကုလ ဟူသော စ ကားနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိခြင်း(သို့) အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းရှိ Cola/Chola မင်းဆက်မှဆင်းသက်လာခြင်း (သို့) နှစ် မျိုး စလုံးနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိပြီး မွန်တို့က ဂိုလာ/ဂလာ ဟုမွေးစားယူကာ မြန်မာများထံတွင် ကုလားဟု အသံ ထွက်ပြောင်းသွားကြောင်း တွေ့ရှိနိုင်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ယူဆချက်အားလုံးတွင် ကုလားဟူသောဝေါ ဟာရသည် အဖျက်သဘောဆောင်သည့် အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်မှုမျိုး လုံးဝမ ရှိကြောင်း ဖော်ပြလျှက် ရှိ သည်။ ထို့ပြင် အဆိုပါအသုံးအနှုန်းအား တဖက်သားအား ထိခိုက်မှုတစ်စုံတစ်ရာမ ရှိပဲ ပြောဆိုသုံးနှုန်းနိုင် သည်သာမက အပြုသဘောဆောင်သည့် အဓိပ္ပါယ်မျိုးပါ သက်ရောက်စေကြောင်း တွေ့ရှိနိုင်သည်။
ကုလားဟူသော ဝေါဟာရသည် ရှေးဟောင်းစကားအခေါ်အဝေါ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုဂံခေတ်ကျောက်စာများ (အေဒီ၁၂ရာစု-အေဒီ ၁၄ရာစု)တွင် ကုလားဟူသော စကားလုံးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကုလားကခြေသည်၊ ကုလား ပသာသည်(ဗုံတီးသမား) စသည့် အသုံးအနှုန်းများကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။ အိန္ဒိယဗိသုကာပုံစံဖြင့် တည်ဆောက် ထားသော စေတီပုထိုးများကိုပင်လျှင် ကုလားကျောင်းဟုခေါ်ဝေါ်ကြသည်။(ဥပမာ-အာနန္ဒာ ၊သဗ္ဗေညု[ဘာသာပြန်သူ] )။ အကယ်၍ ကုလားဟူသော ဝေါဟာရသည် ခေါ်တွင်ခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ် (သို့)အရာဝထ္ထုအား ဂုဏ်သရေညှိုးနွမ်းစေခဲ့လျှင် မြန်မာတို့အနေဖြင့် ၎င်းတို့ အမြတ်တနိုး ကိုးကွယ် ရာ စေ တီ ပုထိုးများကို ကုလားအမည်ရှေ့မှထည့်၍ ခေါ်ဆိုလိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။
ပုဂံမင်းဆက်မှ အလောင်းစည်သူမင်းကြီး၏သားတော် နရသူမင်းအား ရာဇ၀င်ဆရာတို့က ကုလားကျမင်း ဟုခေါ်ဆိုကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အဆိုပါမင်းအား အိန္ဒိယလူမျိုးတို့က လုပ်ကြံသတ်ဖြတ် ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည် လောင်းကြက်မင်းဆက်၏ နောက်ဆုံးဘုရင်၊ အေဒီ၁၄၃၀တွင် မြောက်ဦးမြို့ကိုစတင်တည်ထောင် သူ၊ မြောက်ဦးမင်းဆက်၏ ပထမဆုံးဘုရင်ဖြစ်သူ နရမိတ်လှ(မင်းစောမွန်)အား ရာဇ၀င်ဆရာတို့က ကု လားပြည်ပါမင်းဟု နာမည်ပြောင်ပေးခဲ့ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မင်းစောမွန်သည် အင်းဝ ကျူးကျော်စစ်ကြောင့် ဘင်ဂေါပြည်သို့ ခိုလှုံခဲ့ရသောကြောင့်ဟု ရာဇ၀င်ကြောင်းများအရ သိရှိရသည်။ အ ကယ် ၍ ကုလားဟူသောဝေါဟာရသည် သိမ်ဖျင်းနိမ့်ကျသော အသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လျှင် ထိုခေတ် အခါက သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်တည်းဟူသော ပုဂ္ဂိုလ်အား မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ ထိုကဲ့သို့သော အ တိုကောက်အမည်ဖြင့် အမှတ်သညာပြုရဲလိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။(နှိုင်းယှဉ်ရန်-ပုဂံခေတ် နရသီဟပတေ့မင်း အား ရာဇ၀င်တွင် တရုတ်ပြေးမင်းဟုဖော်ပြထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အေဒီ၁၂၈၇ခုနှစ်တွင် ကူဗလိုင်ခန်၏ တရုတ်တပ်များ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်သဖြင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရသောကြောင့် ဖြစ် သည်။)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထင်ရှားဆုံး ရာဇ၀င်ဆရာများထဲမှာ တစ်ဦးဖြစ်သူ၊ မြန်မာ့သမိုင်းတွင် အရေးပါဆုံး ရာဇ၀င် သုံးပိုင်းအား ညောင်ရမ်းခေတ်(ဒုတိယအင်းဝမင်းဆက်) အတွင်း ရေးသားပြုစုခဲ့သူ ရာဇ၀င်ဆရာ၏ အမည် မှာ ဦးကုလား ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကုလားဟူသော အမည်သည် အောက်တန်းကျသည့် အမည်နာမ တစ် ခုဖြစ်နေခဲ့ပါလျှင် အလွန်ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် အဆိုပါရာဇ၀င်ဆရာသည် ၎င်း၏အမည်အားပြောင်း လဲ ပစ် မည်မှာ သေချာသလောက်ရှိသည်။
ရှေးခေတ်အခါက ရခိုင်၊မြန်မာ၊မွန် ဘုရင်များသည် ၎င်းတို့ကိုယ်၎င်းတို့ ဗုဒ္ဓ၏မျိုးနွယ်ဖြစ်သည့် သကျသာကီဝင်မျိုးရိုးမှ ဆင်းသက်လာသည်ဟု ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။အထက်ပါအချက်အရ ထို ဘုရင်များသည် ၎င်းတို့ကိုယ်၎င်းတို့ အိန္ဒိယတိုင်းသားမျိုးဆက်များအဖြစ် ယုံကြည်ခဲ့ကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။ အဆိုပါအချင်းအရာများကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် အိန္ဒိယတိုက်ငယ်မှ မျိုးနွယ်စုများနှင့် ပတ်သက် ၍ နှိမ့်ချ ဆက် ဆံခြင်း(သို့) လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းစသည့် အချက်များနှင့်ပတ်သက်သော ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် အကြောင်းပြ ချက် တစ်စုံတစ်ရာရှိပါသလား။
မြန်မာဘာသာစကားတွင် တစ်စုံတစ်ခုကို ကုလားဟူသော အသုံးအနှုန်းဖြင့် ရှေ့မှဖြစ်ေ စ၊နောက် မှဖြစ်စေ ပေါင်း စပ်၍ အမည်သစ်ဖန်တီးကာ အဆိုပါအရာသည် မူလဘူတနိုင်ငံခြားမှဖြစ်ကြောင်း (သို့) နိုင် ငံခြားမှဝင်ရောက်လာကြောင်း(သို့) မြန်မာပြည်၏ အနောက်ဖက်ရှိတိုင်းပြည်များမှဖြစ်ကြောင်းကို အလွယ် တကူသိရှိနိုင်ရန် ခေါ်ဆိုလေ့ရှိခဲ့သည်။
နောက်တွင် ကုလားထည့်သွင်းခေါ်ဆိုသည့် နာမ်များ
အခန်း(၃)ခိုင်မာသည့်စာပေများတွင် ကုလားဟူသော အသုံးအနှုန်းအား သုံးစွဲပုံ ဥပမာများ
(1) ယောအတွင်းဝန်ဦးဖိုးလှိုင်-ဥတုဘောဇနသင်္ဂဟကျမ်း၊၁၈၈၀ခုနှစ်၊စာမျက်နှာ-၈၉ [အနောက်ပြည်သားများကို မြန်မာတို့က ကုလားခေါ်သည်]
(3) အရေးတော်ပုံငါးစောင်တွဲ-သုဓမ္မ၀တီပရက်စ်၊ ရန်ကုန်၊ ၁၉၂၀ခုနှစ်၊ စာမျက်နှာ ၃၅၆ [ကုလားပန်းသေးမြို့သားများ……]
(4) မန်လည်ဆရာတော်-မဟာသုတကာရီ မာဃဒေ၀လင်္ကာသစ်၊ ရန်ကုန်၊ ၁၉၀၄ခုနှစ် (ပြန်လည်ပုံနှိပ်ခြင်း ၁၉၃၈ခုနှစ်)၊ စာမျက်နှာ ၃၇ [ကုလားပသီ ဘရင်ဂျီက………..]
(6) ကျည်းကန်ရှင်ကြီး- အမရပူရသို့ပေး မေတ္တာစာ၊ ၁၈ရာစုအတွင်း ရန်ကုန်သို့အလည်အပတ် လာရောက်စဉ် ရေးစပ်ခဲ့သည်။ [အာရမဏီ ဘရင်ဂျီ၊ ကပ္ပလီခလာသီ၊ ဇော်ဂျီကလယ်၊ ကုလားနွယ်တိုင်းမသိ၊ ထုပတိနှင့်………]
U Khin Maung Saw(Berlin)၏ (Mis)Interpretations of Burmese Words:Part I.In the case of the term Kala (Kula) သုတေသနစာတမ်းအား တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ အပိုင်း( ၂ )ဆက် လက် ဖတ်ရှုပါရန်
ဦးခင်မောင်စော၏ မူရင်းစာတမ်းကို ဖတ်ရှူရန် ဒီမှာ click ပါ။